A na-ahapụ ọgwụ doping na ịgba ígwè? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Mgbapu ọbara na ịgba ịnyịnya ígwè - otu esi ejikwa
Mgbapu ọbara na ịgba ịnyịnya ígwè - otu esi ejikwa
A na-ahapụ ọgwụ doping na ịgba ígwè?
N'otu afọonye na-agba ígwèFrancesco Moser jiriọbarammịnye ọbara iji kwadebe maka nnwale ya nke ọma imebi ndekọ awa. ''Mgbatị ọbara'bụmachibidorosite na International Olympic Committee (IOC) na 1985, ọ bụ ezie na enweghị ule dị maka ya n'oge ahụ. Ndị Swedenonye na-agba ígwèNiklas Axelsson nwalere ihe dị mma makaEPOna 2000.
Ruo ogologo oge ka egwuregwu dị, e nweela ndị na-eme egwuregwu na-achọ uru na ohere ọ bụla iji gosi onwe ha ọkachamara na ọrụ taa wee gbanwee ọgwụ ndị na-eme ka arụ ọrụ. Nụ maka ya n’ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ n’egwuregwu ọ bụla. Na United States, e boro ụfọdụ ndị egwuregwu bọọlụ kacha mma oge niile na-eji PED.
Offọdụ n’ime ha na-arụ ọrụ, mana nke na-efu nnukwu ego, ahụ ike ha, na ndị ọzọ anaghị arụ ọrụ ọ bụla. Yabụ kedu ndị bụ kedu ka ha si arụ ọrụ na kedu ka ha si arụ ọrụ? Nye m nkeji ole na ole, m ga-enye gị ụfọdụ nkuzi sayensị banyere ihe kpatara na ndị scammers anaghị emeri. Anyị na-akpọ ha ọgwụ ọjọọ, mana ọtụtụ ndị na-akwalite arụmọrụ bụ naanị nsụgharị nke kemịkalụ ị nwere na ahụ gị.
Ndị a bụ njikọ ahụ gị na-eji wuo ma gwọọ onwe ya ma debe onwe gị ahụike, na-enwe olileanya ịpụkwu ahụ gị, ị nwere ike mechaa banye ụwa mgbu. HGH, ma ọ bụ hormone na-eto eto mmadụ, bụ ebe dị mma ịmalite. N’agbanyeghi na anyi niile nwere ya, otutu mmadu amaghi ihe o bu.
Ahụ gị na-emepụta HGH site na pituitary gland na ntọala nke ụbụrụ gị. Ọ na - eme ka uto na sel nwee uto, na - arụkọ ọrụ na hormone ọzọ a na - akpọ insulin-like growth factor-1, nke a makwaara dị ka IGF1. HGH gbanwere IGF1 n'ime imeju ma nwee ọtụtụ mmetụta n'ime ahụ dum gụnyere uto na-abawanye na uto ahụ.
Nmeputa ihe okike nke HGH na-eto eto n'oge afọ iri na ụma, na-agbada site na afọ 30, ma na-agbada na ndụ gị niile. Mkpụrụ hormone na-eto eto na-enyere aka ịchịkwa metabolism na ndị okenye, mana isi nzube ya bụ iji kpalite uto n'oge nwata. Beendị inwere ọgwụ HGH abụrụla nke a rụpụtara kemgbe 1985 wee kwado ya na US
Mana lee ihe. N'ezie, maka ndị niile na-eme egwuregwu na ọtụtụ egwuregwu na-eji HGH, enwere obere ihe akaebe na ọ na-enye nkwalite arụmọrụ ọ bụla. HGH nwere ike kpalite ahụ ike na ọkpụkpụ, mana ma nke a na - eduga n'ike ma ọ bụ ntachi obi adịghị ama.
Ndị nchọpụta nọ na California mere nyocha na nso nso a banyere ọmụmụ ihe 44 nke uto hormone na ndị na-eme egwuregwu. Ihe karịrị ndị ọrụ afọ ofufo 300 na ihe ọmụmụ ndị a niile nwetara ngụkọta nke ụbọchị iri abụọ nke ọgwụ ogwu ọgwụ, dịka usoro ọgwụ ndị ọkachamara na-eme egwuregwu nwere ike iji. Ọ bụ ezie na ndị natara HGH kama placebo mụbara ahụ ha na-ebuwanye ibu karịa ihe karịrị kilogram abụọ, enweghị mmụba a na-atụ atụ na ike ha ma ọ bụ mmega ahụ.
E nwere otu ọmụmụ ihe niile gosipụtara mmetụta dị mma nke uto na-eto eto na egwuregwu - Mahadum nke Queensland sayensị na Australia lere ndị egwuregwu ntụrụndụ 103 anya na 2010 wee chọpụta na ndị were HGH enweghị ọganihu na ike ma ọ bụ ahụike zuru oke, agbanyeghị, ha Sprint ugboro na igwe kwụ otu ebe mma site 4%. Ọ gwụla. Ọ bụghị ọtụtụ ihe dị iche, mana na asọmpi 4% nwere ike ịbụ ọdịiche dị n'etiti mmeri ọla edo na imecha ikpeazụ.
Kedu ihe ọmụmụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ na-egbochi doping achọpụtala na mgbe ejiri HGH mee ihe na testosterone ma ịmara ndị na-akpọ oku nke hormone testosterone, arụmọrụ na-akawanye mma? Ọ bụrụ na ị sị na steroid nke anabolic merie onwe gị ihe nrite ọla edo. M na-ekwu banyere steroid tupu, mana ọ gaghị ekwe omume ikwu maka nkwalite arụmọrụ na-enweghị imetụ ha aka ọzọ. Steroid bụ ụdị egbugbere ọnụ ma ọ bụ abụba abụba, ahụ gị na-eme ụdị abụọ dị iche iche.
May nwere ike ịma nke ọma acorticosteroids. Mmoa gị hormone, nke a na-emepụta site na gland adrenal gị n'ebe ahụ na akụrụ gị, ha na-ejikwa ihe ndị dị ka ọrụ mgbochi, nzaghachi nrụgide, na ịchịkwa mbufụt. Enwere ike ịnyela gị ọgwụ bụ ụdị nsụgharị sịntetị nke ndị steroid a iji mesoo mmerụ nkwonkwo ma ọ bụ ọrịa autoimmune ma ọ bụ naanị ajọ nsị nke ivy nke mere m ji were ya.
Otherdị nke ọzọ nke steroid bụ orrogenic anabolic steroid. ihe kachasị mkpa bụ testosterone, nke, dịka ị maara, na-amịpụta njirimara nwoke na nwanyị. Ma ndị steroid nwekwara ogige ndị na-akpali njikọ nke protein na n'ikpeazụ eriri anụ ahụ ọhụrụ.
A na-akpọ usoro a anabolism na steroid nke na-enye ya ike anabolic steroid. Ọ bụrụ na ọ bụ nsụgharị sịntetị, a na-eji ndị ọjọọ ahụ eme ihe na-akwadoghị ma na-emegbu ndị egwuregwu, nke a nwere ike ịbụ okwu ka mma. Nchịkọta nke steroid na mmega ahụ nwere ike ime ka nwoke dịkwuo ike karịa 38 pasent ma ọ dịkarịa ala dị ka ụmụ nwanyị.
Anabolic steroid nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma, ọkachasị ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na-eri ihe karịrị otu. Ndị na-eme egwuregwu na-a steroidsụkarị steroid na usoro nke ga - adị n’agbata otu ọnwa na ọnwa atọ mgbe ọzụzụ dị arọ na - apụ n’oge. Nke a bụkwa mgbe ha agaghị enwe ike ịnwale.
Mgbe a na-agbanye ọgwụ ndị a ma ọ bụ loro ha, ha na-abanye n'ime anụ ahụ ike, ebe a na-etinye ha na ndị natara na membranes nwere sel muscle. Ndị nabatara na-ebute hormones steroid na cell nucleus, ebe ha na-akpali anabolism na njikọ nke protein. Mana steroid nke anabolic na-esokwa ụfọdụ mmetụta dị nro.
Ọdịdị nke testosterone dị elu abụghị naanị na-eduga n'ịgba aghara na agụụ mmekọahụ, mana, nke zuru oke, nwekwara ike iduga mpempe akwụkwọ, enweghị ike, na mmebi obi. N'ime ụmụ nwanyị, ndị steroid nwere ike ibute ntutu ihu, otutu, mmebi imeju, mbelata ara na mgbanwe ma ọ bụ nkwụsị zuru oke nke oge ịhụ nsọ. Ugbu a na ị na-eche ihe m ga-emesi gị obi ike na ahụ a bụ kpamkpam steroid n'efu.
Echere m, ọ dị m mkpa ịdepụta mmetụta n'akụkụ ọzọ? Emela ihe ahụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-emekwu ihe ndị na-eme ka mmiri na-eme ikuku, karịchaa agbụrụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè, enwere m ike ịtụ aro ka ị ghara isonye na doping ọbara? Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na ndị ọzọ na-eme egwuregwu ntachi obi na-ejikarị ndị na-agwọ ọrịa anabolic eme ihe, ma ịmịnye ọbara na-aghọwanye ihe nkịtị, n'ọtụtụ akụkụ n'ihi na ọ na-esi ike nchọpụta. Typedị doping a n'ozuzu na-arụ ọrụ n'ụzọ abụọ.
N’ọtụtụ ọnọdụ, ma ọ bụ site n’ịnye ọbara kpọmkwem, ndị na-eme egwuregwu na-eji ọbara nke ha ma ọ bụ site n’ịgba ụdị eju ọgwụ ọzọ nke erythropoietin ma ọ bụ EPOa hormone, nke na-achịkwa mmepụta nke mkpụrụ ndụ ọbara uhie nke ahụ. N’ọnọdụ abụọ ahụ, ebum n’uche bụ otu ịba ụba mkpụrụ ndụ ọbara uhie n’ime ahụ iji nwekwuo ntachi obi. Mkpụrụ ndụ ọbara uhie na-eji protein a na-akpọ haemoglobin ijikọta oxygen ma wepụta gị n'ahụ.
Ebe ọ bụ na ahụ gị na-eji ihe ruru 20 ugboro karịa oxygen n'oge mmega ahụ siri ike, mgbe ahụ n'oge izu ike, mgbe ị nwere ike ịba ụba ọnụ ọgụgụ ọbara uhie site na ịnwekwu ọbara ma ọ bụ na EPO, anụ ahụ gị nwere ike ịga n'ihu na-ewere oxygen. mkpa ha na i nwere ike nọkwasi gị igwe kwụ otu ebe a otutu ogologo ma ọ bụ ihe ọ bụla. Tupu ị mara ihe na-emenụ, ị meriri n’ọsọ ịgba ọsọ a kacha mara amara n’ụwa site n’ịghọ aghụghọ ule.
Thewa dị egwu nke PED abụghị n'ezie na HGH steroid na doping ọbara. Ogologo oge ị na-ele anya, onye bịara abịa akụkọ nke ndị na-eme egwuregwu na-anwa iji uru wee ghọọ. Nke a gụnyere onye egwu bọọlụ Manny Ramirez, bụ onye amachibidoro na gonadotropin chorionic mmadụ maka egwuregwu 50 na 2009 mgbe ọ nwalechara nke ọma.
Hormone nke ụmụ nwanyị na-emepụta n'oge afọ ime. Ọ tụgharịrị na ọ na - emekwa ka ogo ụmụ nwoke na - eto eto na nwoke ma nwee ike ịmụba spam. N'ụzọ na-emegide onwe ya, ọtụtụ ndị na-eme steroid na-ewere HCG mgbe ha rụpụtara ọmụmụ.
Egwuregwu a na-ekwu okwu ya na-agbapụ. Ojiji PED yiri nke a bụkwa nsogbu na ụwa ịgba ụta, ebe aka na-ama jijiji nwere ike ibute arụmọrụ adịghị mma. Ma enwekwere mgbada mgbada.
A PED nke ị nwere ike ịmaghị dị ruo 2012. N'oge ahụ, onye ọkpụkpọ NFL Ray Lewis kwetara iji ihe ndị ahụ na-enwe olileanya na ọ ga-agbake ngwa ngwa mgbe ọ tichara biceps. Dị anụ ahụ nke ụmụ mgbada na-eto eto nwere nnukwu uto hormone IGF1, nke m kwuru na mbụ.
Nke a bụ akụkụ ụfọdụ ihe mere antle ji eto ngwa ngwa. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-ekwu na ha nwere ike wepụ homonụ a site na anụ ahụ wee tinye ya na ịgba nke a ga-enye n'okpuru ire. O doro anya na ọ ga-eju gị anya ịnụ na ọ nweghị ihe akaebe na enwere ike iji IGF1 rụọ ọrụ na pill ma ọ bụ ụdị ọgwụ site na otu, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na hormone sitere na ndanda na ụfọdụ mgbakwunye mgbada na-ewu ewu na New Zealand Market.
Ya mere, nke a bụ ndụmọdụ m nye ndị niile na-eme egwuregwu ebe ahụ, nhọrọ bụ ịgbanye onwe gị na testosterone nke sịntetik nke na-ahapụ gị enweghị ike na enweghị ike ịgbanwe ọnụọgụ ọbara ị nwere n'ime ahụ gị ma ọ bụ zụta ụfọdụ ndị nzuzu, nke a na-ekwu na ọ bụ isi mgbada, ma tinye ya n'okpuru ire gị anaghị m akwado ịhọrọ nke ọ bụla. Daalụ maka ikiri ihe omume nke sayensị a n'ụzọ pụrụ iche, na-ekele ndị na-akwado anyị n'okpuru ndị anyị na-enweghị ike ime nke a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, nkwupụta ma ọ bụ echiche maka anyị ị nwere ike ịchọta ha na nkwupụta ndị dị n'okpuru ma ọ bụ na Facebook na Twitter ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-ama gị, anyị nwere ike ịga YouTube.com/scishow ma denye aha nke ọma
Gini mere eji etinye otutu doping na ịgba ígwè?
Cygba ígwèbụkwa otu n'imeiheegwuregwu ole na ole na-atachi obi, nke nwere ike iso nye akana dopingOmenala. Ndị isi ọrụ kwuru na ha manyere ndị na-agba ọchịchị mgba okpuru ka ha soro rụọ ụlọihepremier racer - iji ọgwụ na-eme ka ọrụ ka mma makaiheezi nkeiheotu.Naịdị arọ nke akụkọ ihe mere eme bụ ihe ọzọ dị mkpa.June 15. 2012 r.
Okporo ụzọ anyịnya igwe na zoro ezo Motors abụghị kpọmkwem ọhụrụ, ma na a Prorider jidere sọọ mpi na otu, anyị kwubiri na ọ bụ oge na-agbalị otu maka onwe anyị. Kedu ka igwe ọgbụgba igwe nwere igwe zoro ezo na-eche yana ọsọ ọsọ anyị ga-agba ya? ♪ ♪ - Gini ka anyi nwere ebe a? Nke a bụ otu n'ime igwe kwụ otu ebe izizi ebe a na UK iji gosipụta moto zoro ezo. A na-echekwa ya ebe ahụ na tube oche ma na-eme ka ihe mgbakwasị ụkwụ dị n'okpuru site na pinion na Dan nwere ike gbanwee ya ma gbanyụọ ya site na iji aka - Batrị dị ebe a, na karama ahụ, ị ​​nwere ike ịnweta batrị ndị nọ n'okpuru ebe a oche oche na-ezo n'elu engine ya onwe ya, ma ndị dị obere karị, o nwere a obere mkpumkpu na-agba ọsọ ma ọ bụ ụgbọala oge.
Ya mere, anyị na ajụjụ na-ere ọkụ mgbe ahụ. Ike ole, ọ na-adị ka ọ dị ize ndụ otu anyị siri guzoro ebe a, ike ole ihe a ga-agbakwunye? O doro anya na otu na 200 watts maka otu awa. - Ee, echere m na ezigbo ndị otu anyị ga-esiri anyị ike karị. ♪ - Olee otú ọ na-adị n'okporo ụzọ mgbe ahụ? Ọfọn, na-amalite na, anyị na-now na-aga na 25, 30 km kwa awa.
Ma ọ bụghị na. Enweghị m ike ịnwe mgbochi ọ bụla site na injin ahụ belụsọ ma m laghachi azụ, nke dị ntakịrị. Gịnị na-eme ma anyị gbanye ya? Ka anyị gaa.- Aga m ahapụ gị ka ị gaa n'ihu ugbu a Si.- Ngwa, ọ dịkwa mma enyi.
Ugbu a ọ bụ mmetụta dị egwu n'ihi na moto ahụ nwere oke oke na etu o siri gbanwee cranks, kedu ihe dị na 86 RPM nke mere ka ọ daa nwayọ mana mgbe ahụ ọ dị ebe ahụ n'azụ, ọ ga - ewe dị ka m nwere ike ihe m na-ekwu, a nọ m na 50-11, anaghị m eme ọtụtụ.
Dan, ị na-eme ọtụtụ azụ n’ebe ahụ? - Ọ bụghị ihe ọjọọ - ya mere eziokwu ahụ bụ na enweghị m ike ịda ngwangwa ngwa ngwa ngwa ngwa ahụ dị ntakịrị, mana anyị na-anya ngwa ngwa. ♪ - Ọ dị ezigbo iche na E-Bike ọ bụla m rutere n'oge gara aga ebe ị na-agagharị ma ị nwere ike ịnwe mmetụ moto na-enye obere oge ọ na-adị ka ọ dị ihe ọzọ na-agba m ụkwụ. - M nwere ike iso na 200 watts, - Dị nnọọ gbatịa ntakịrị. - Ọfọn, ugbu a ọ bụ nke m inye m obere ihe mgbu n'akụkụ m hụkwara ya n'anya.
Ugbu a dị ka Si.A dị na mbụ, nke a bụkwa usoro ịrị elu, nke pụtara na arụmọrụ na-amalite na cadence n'okpuru 86. Ugbu a, o doro anya na ọ dị otu nke bụ maka ala dị larịị, nke pụtara na na cadence ruo 100 ọ ka ga-enye gị ụfọdụ ike.
Nke ahụ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya karị ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ n'ihi na n'ezie ọkacha mmasị m maka ịrịgo dị ka nke a ga-abụ 90, ma ọ bụ ma eleghị anya ọbụna otu narị. Yabụ, nkata m ka bụ, opekata mpe, m nwere olile anya.- Otu ajụjụ ikpeazụ a ga-aza, Kedu ka igwe ọrụ a si arụ ọrụ? Ugbu a, anyị maara na ọ bụ ihe dị ka 150 watts, anyị ji ụkwụ na-agba ọkpọ azụ wee tụọ ya, mana anyị abịarutela ọrịrị jọgburu onwe ya n'ebe ndịda nke England Mr Lloyd nwere eze ugwu, ihe ọ ga-eme Onye mere njem nke Britain na 2011.
Ya mere, anyị bụ, afọ ise mgbe e mesịrị, afọ atọ nke ezumike nká. Nwere ike Dan agbaji KOM ya? - Ka anyị chọpụta. Ya mere, ọ bụ oge eziokwu, n'ihe dị ka mita 100 m ga-atụgharị aka ekpe, m ga-eme ka injin m rụọ ọrụ ma hụ ma m nwere ike iti onwe m aka. ♪ ♪ Yabụ, anyị anọghị nso site na elu ọzọ, Steve nọ ebe ahụ.
O nwere ihe niile n’azụ ya ugbu a. Oh enwere m ike ịhụ na m na-echeta otu ihe siri ike na nke ahụ. Ma anyị nọ n’ebe ahụ echere m - N’aka, ọ bụ oge maka nsonaazụ.
Dan, olee mmetụta ị na-enwe? - A obere zuru ike, ma m bụ nnọọ keokuko. Echere m na ọ na-egosi na ịmalite adịghị mfe ọ bụla, ị na-anya ngwa ngwa na nke ahụ bụ otu ihe dị ka injin yana ịnwe ọkụ. Ya mere dabara Dan, ọduọ Dan, mere 7:02.
Dan lara ezumike nká na Amotor, ọ ka ji nkeji na 14 sekọnd nwayọ - otu a ka ịnyịnya ibu si aghọ agbụrụ - na ị dịbu mma. - Ee - Aka nri, echere m na ajụjụ bụ mgbe ahụ ka ndị na - ele anyị anya ga - azụ ma jiri igwe zoro ezo zụta igwe agba ọsọ? Oh na mgbakwunye, Pedalthon ọ ga-enweta ọtụtụ, ọtụtụ injin doping n'ime afọ ole na ole sochirinụ? - Eeh, ajuju nke mbu dabere na ihe kpatara in’eji n’aga igwe gi. Echere m, ọ bụrụ na ị hụrụ mmetụta nke ibu ọnụ n'anya, ma ọ bụ oge ọ bụla ị na-apụ, ọ na-esiri gị ike ijide ndị ọkwọ ụgbọ ala gị nwere ike ịbụ ndị na-eto eto, ọsọ ọsọ, ma ọ bụ nwee oge iji na-eme ihe karịa gị, mgbe ahụ, eche m n'echiche . - O nwekwara ike ịrụ ọrụ ụzọ ọzọ.
gary fisher ugwu igwe kwụ otu ebe
Yabụ ọ bụrụ na ịnwere onye ọrụ ma ọ bụ enyi nwanyị na-arụ ọrụ nke malitere ịgba ịnyịnya ígwè, ma ọ bụ ikekwe di ma ọ bụ nwunye na-esiteghị ka gị, ma ọ bụ ikekwe nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị nọ n'afọ iri na ụma nke na-enweghị ike idebe, nye ha igwe kwụ otu ebe nwere igwe zoro ezo dị n'ime ya bụ ụzọ dị mma maka gị abụọ iji nweta ihe na-agba ịnyịnya na ọtụtụ mbọ, ọmarịcha na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ha nwere ike ijide nke ọma. - Ma gịnị banyere echiche nke iru ihe? Nke a ga-adị anyị niile mkpa n ’oge ụfọdụ ka anyị chee ya ihu, mgbe ịnwere injin, ọ bụghịzị KOM gị ị ga - enweta ma ọ bụ enwetaghị. Ọ bụghị gị ga-arị ugwu ma ọ bụ duga ndị otu na-agba ịnyịnya.
Yabụ, ọkachasị ma a bịa n ’ịrụ ọrụ, ọ dị anyị niile mkpa ịnya igwe kwụ otu ebe n’oge a, ọ bụghị ya? Ma nke ahụ apụla kpamkpam. - Ee ma chere ihu, onye ọ bụla chọrọ ịga ọsọsọ nwere ike ịpụ zụta ezigbo ọgba tum tum kama ịnwe igwe zoro ezo dị ka nke a, yabụ echeghị na anyị ga-abụrịrị ọtụtụ. ichegbu onwe. Ọbụna ma ọ bụrụ na ndị a ga-abụ nke a na-ahụkarị na ọha na eze n'afọ ole na ole sochirinụ, ọ bụrụhaala na a zere ha asọmpi ọ bụla.- Ee, mana ọ bụrụ na ha enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka iji igwe kwụ otu ebe gaa ọrụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ, nke ahụ bụ ihe dị mma .
Ma ọ bụ n'eziokwu, ọ bụrụ na ọ na-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka ịpụ na ịnya ụgbọ ala ma nwee ọ enjoyụ na ya, mgbe ahụ ọ bụ ihe dị mma. Echeghị m na ọtụtụ ndị nwere igwe zoro ezo ga-egosi agbụrụ otu obodo ha ma ọ bụ ndị otu agbụrụ na-agba ịnyịnya, n'agbanyeghị na onye nzuzu ma ọ bụ abụọ ga-anọ ebe ahụ - ihe dị ịtụnanya bụ Si, nke ahụ bụ ezigbo ngagharị emeela n'ezie site n'aka onye debara aha ya n'akwụkwọ.- Amaghị m onye gaara eme nke ahụ.- Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ Col de la Madone zuru ezu, nke ị mere n'ezie na igwe eletrik, ị nwere ike ịchọta ya, dị nnọọ ebe ahụ.- Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ngosi GCN kachasị ọhụrụ ebe anyị na-eme ka ị dị ọhụrụ na ihe niile Top Gun na ịgba ígwè mgbe ahụ ị nwere ike ịpị ebe ahụ n'okpuru - Anyị nwere ihe abụọ ịchọrọ ịme tupu ịbanye na nke ọ bụla n'ime isiokwu ndị a. jee ije.
Kedu ụdị doping ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eji?
Nandị na-agba ígwè'Erythropoietin kachasị amasị ya emeela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ ka ọ bụrụ mmachi dị ka PED na-esote ewu ewu. Lance Armstrong kpọrọ EPO '10% -er' na ọgwụ nke ị ga - emenara. Ọ na - eme ka ọbara uhie uhie na ikuku oxygen na - agafe na akwara maka ike na ume.
Ọtụtụ ndị ọkachamara na-edozi ahụ na-akwado nri kwesịrị ekwesị maka ndị mmadụ n'ozuzu, mana mmega ahụ siri ike nwere ike ime ka mkpa maka ụfọdụ nri. N'ebe a, anyị na-akọwa ụfọdụ nri na mgbakwunye kachasị mma ị kwesịrị ịtụle iji bulie arụmọrụ gị. Iwu zuru oke, enwere m ike ịgbakwunye.
Irongwè ga-abụ nke mbụ. Iron bụ otu ihe dị mkpa micronutrients maka ntachi obi cyclists. Ọ bụ akụkụ dị egwu nke hemoglobin nke na-eburu oxygen gburugburu ahụ.
Igwe ígwè dị ala na-emebi arụmọrụ. Ugbu a, ígwè na-abịa n’ụdị abụọ, Heme na nke abụghị heme. Ngwongwo Heme sitere na isi anumanu ebe ndi na-abughi heme sitere na osisi.
Ma ọ bụ n'ezie obere obere ọma etinye obi gị dum. Ọ dị mkpa ka mara nke usoro na-eji na-emeso elu ígwè Dịkwuo oriri. N'ihi na akụkọ igwe abụghị ihe ole ị na-eji, kamakwa otu ị si etinye obi gị dum.
Dịka ọmụmaatụ, ịnwe vitamin C na iron ga-enyere gị aka ịbawanye nri gị, ebe eriri nri na tannins dị na tii na kọfị ga-egbochi ịmịnye ígwè. Mpempe akwụkwọ ọzọ dị mgbagwoju anya bụ na anaghị amụrụ iron nke ọma mgbe ọ gwụchara mgbatị n'ihi na hepcidin, nke imeju na-ewepụta iji gbochie ịmịnye igwe, na-abawanye mgbe nrụgide na mmega ahụ gasịrị. Ihe oriri ndị e jiri Iron mee nwere gụnyere anụ na-acha uhie uhie dịka anụ ehi, enyí nnụnụ, kangaroo, oyster, na ọkụkọ imeju ya; maka ndị na-anaghị eri anụ, enwerekwa mkpo dị egwu dị ka lentil, soybeans, tofu, na ọka dị ka osikapa agba aja aja, na ihe ndị ọzọ dịka aprịkọt a roara n'ọkụ, molasses, na nri ụtụtụ e wusiri ike.
Ma ọ nwere ike ịba uru ịtụle mgbakwunye. M ka na-a pụ ọgwụ mgbochi ígwè kwa ụbọchị. Amaara m nke ọma na ụfọdụ ndị dọkịta na-eme egwuregwu na-atụ aro ka a na-etinye ígwè ihe mgbakwunye nye ndị niile na-agba ịnyịnya n'okporo ụzọ, ọkachasị ụmụ nwanyị, n'ihi na ha achọpụtala na ọ na-enyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile aka ịrụ ọrụ nke ọma.
Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na atọrọ ụkpụrụ dị ala maka Nkịtị dị ala karịa ọnụ ọgụgụ ndị nkịtị. Ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ na nnweta dị ukwuu karịa igwe dị n'ime ahụ na-enyere aka ịrụ ọrụ. Kpamkpam na-na-ewere m ígwè emeju dị nnọọ ka m nwere ike mbanye na-arụ ọrụ a obere ngwa ngwa - Vitamin B12 nwere ọtụtụ ọrụ na ahu.
Otú ọ dị, a na-eji ya eme ihe maka usoro okike, ịrụ ọrụ nke ụbụrụ na ụbụrụ ụjọ; nakwa maka ịkpụpụta mkpụrụ ndụ ọbara uhie. Ya mere, dị ka ígwè, ọ bụ akụkụ dị oke mkpa nke nri onye na-agba ígwè. Enweghị B12 na nri nwere ike ịkpata anaemia, ọ bụ ezie na ọ bụghị otu ihe dị ka anaemia kpatara ụkọ vitamin B12, iron.
Mgbe ị na-enweghị B12, ọrịa anaemia a na-eme ka ahụ mepụta mkpụrụ ndụ ọbara buru ibu buru ibu nke na-efunahụ ikike ibu oxygen. Adịghị mma. Nri bara ọgaranya na B12 gụnyere azụ, anụ, àkwá, na mmiri ara ehi, mana enweghị ụzọ B12 a pụrụ ịdabere na ya na nri osisi karịa ndị nke ewusiri ike, dịka ụfọdụ mmiri ara ehi na nri ụtụtụ.
Yabụ ọ bụrụ na ị nọ na nri osisi, tụlee itinye mgbakwunye nri ma ọ bụrụ na ịnweghị ụzọ ndị a ewusiri ike. Nnyocha ọbara dị mfe nwere ike inyere aka ịchọpụta ma ị nwere ụkọ folic acid. A makwaara dị ka vitamin anyanwụ, ọ dị mkpa maka absorption nke calcium ma si otú ahụ maka mmezi nke ọkpụkpụ siri ike.
Yabụ inwe ụkọ nwere ike ibute ọkpụkpụ na-agbawa agbawa, nke bụ ihe dị ka onye na-agba ígwè, ọ bụrụ na ị naghị emega ahụ, ị ​​nwere ike ibute nsogbu. E gosipụtakwala na ọ ga-arụ ọrụ dị mkpa na sistemu nchekwa ahụ ma melite ike ike, nke niile na-ada ezigbo mma. Ugbu a, a ga-enweta vitamin D kachasị mma na sel gị nke nwere ìhè anyanwụ yana ịkwesịrị iri ihe dịka azụ, àkwá na nri ndị siri ike.
Mana ọbụlagodi na nri kwesịrị ekwesị, o yighị ka ị ga-enweta vitamin D. Um, ọ bụrụ na ị bi na mba nwere ogologo oge oyi dị ka UK, ma ọ bụ na ị naghị enwu ọtụtụ anwụ, ma ọ bụ n'ezie, ọ bụrụ bi na mba anwụ na-acha nke anwụ ma ị na-eyi mkpuchi elu SPF dị elu. Ee ee, ụkọ vitamin D bụkwa ihe na Australia.
Na n'ọnọdụ ahụ, ị ​​nwere ike ịtụle ịgbakwunye vitamin D, ihe ruru 10 milligram kwa ụbọchị. Oh, m ka na-eme ya n'agbanyeghị na m na-ebu ọtụtụ anwụ na igwe kwụ otu ebe. Omega-3 mmanụ bụ ụdị polyunsaturated fatty acid dị mkpa nke anyị ga-abanye site na nri anyị na anyị enweghị ike ịme ya na ahụ anyị.
Omega-3 nwere abụba abụba abụọ. Ha nwere DHA na EPA, anaghị m arịọ gị ka ị kpọọ aha ndị ahụ zuru ezu. Karịsịa, egosiputala EPA iji belata mkpasu iwe na mkpụrụ ndụ gị belụsọ na ọ nwere ike inye aka na mgbake na ọgụ.
Eziokwu ọzọ na-adọrọ mmasị banyere mmanụ omega-3 bụ na ha na-emetụta mkpụrụ ndụ ọbara ọbara gị, na-eme ka ha nwekwuo nkụda mmụọ ka ha wee nwee ike isi na obere capillaries gafere ma ọ bụrụ na ịhọrọ ịgbakwunye na mmanụ omega-3 ọ dị mkpa ijide n'aka na ị na-adị mma mma capsules na na ha nwere ezi EPA na oke DHA. Ma ọ bụ ọbụna họrọ mgbakwunye EPA naanị ma ọ bụrụ na mbufụt ị na-achọ belata. Aga m ewere.
EPA dị ọcha. Otu ugboro n'ụbọchị. Creatine bụ kemịkalụ na-emekarị na ahụ.
Nke a na - enyere aka ịhapụ ike n'oge mgbatị anaerobic. Nke a na-eme ka ọ bụrụ ihe a ma ama na egwuregwu ịgba ọsọ. Ma ọ pụkwara ịba uru maka ụfọdụ ndị na-agba ntachi obi.
N'ezie, ihe omume okporo ụzọ na-agụnye ịgba ọsọ ugboro ugboro na-awakpo ma ọ bụ na-ekpuchi taị. Otú ọ dị, ihu ala bụ na ọ na-akwalite njigide mmiri, ya mere ị nwere ike ịnweta otu kilogram mmiri ma ọ bụ abụọ mgbe ị na-ewere creatine. Egosiputa ihe omumu iji mee ka aru ike di ike ma mee ka mgbatị gi di irè.
Glute akwa mgbatị
Ọ bụrụ n’ịchọghị inwe oke ahụ ike. Ma n'ezie, ị nwere ọtụtụ oge iji gbasie ike tupu ịgbanwee mmalite nke oge n'ime ihe ịgba ígwè nke na-egbu oge mbibi mkpụrụ ndụ nke free radicals kpatara. Yabụ mgbe anyị na-eme egwuregwu, anyị na-etinye nrụgide na ahụ.
Nke a na - eme ka mmepụta nke ihe ndị na - enweghị ihe ọ bụla na - arụ ọrụ, dị ka ụdị oxygen oxygen ma ọ bụ ROX, nke nwere ike inwe mmetụta na - emerụ ahụ n’ahụ. Ugbu a, anyị chọrọ nguzozi n'etiti ihe ndị a na-enweghị onwe ha na antioxidants maka ịrụ ọrụ gbasara ahụike. N'ezie, ịchọrọ ihe ndị ahụ na-enweghị nchekasị iji kpalie mmeghachi omume na mmega ahụ.
N’ihi ya, ị chọghị ịkwụsịlata nchegbu ahụ ozugbo. Otú ọ dị, ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na antioxidants dị ka vitamin C na vitamin A na-ekere òkè n’ịkwado usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. N'ụzọ na-akpali mmasị, mgbe anyị maara nke a, ọmụmụ ihe na-eleba anya na antioxidants dị iche anaghị enwe mmetụta dị mma na mbenata ihe ize ndụ ọrịa.
Mara na nri dị na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri nwere ike ịnwe mmetụta nchekwa. Anyị enweghị ike ijide n'aka ma ọ bụ n'ihi ọdịnaya antioxidant. Ma otu ọ bụla, mgbe ị nwetara site na ịgba ígwè, ọtụtụ mkpụrụ osisi na ọkachasị akwụkwọ nri nwere ike ịba uru.
Ihe mgbakwunye nri na-ewu ewu, nke na-eri nri bụ maraschino cherry juice, nke dịkwa ụtọ. Ihe ọ juiceụ juiceụ beetroot nwere mmetụta bara uru na arụmọrụ mmega ahụ, na ọkachasị nke ọ bụla nwere ike inyere ndị na-agba ígwè aka site na ịbawanye ikike ikuku. Ugbu a, beetroot abụghị naanị jupụtara na vitamin, mineral na ihe ndị dị mkpa dị mkpa, kamakwa juputara na nitrates ndị a na-ahụkarị n'ọtụtụ akwụkwọ nri, mana ọ kachasị tinye uche na mgbọrọgwụ biiti, nke enwere ike ịpị ma tinye uche n'ime ihe ọ juiceụ juiceụ, ma ọ bụrụ anyị nwere na-eri nitrate na ihe ọ juiceụ juiceụ, ọ na-ghọrọ nitrate oxide ke idem.
E gosipụtara nitrate oxide a iji belata ọbara mgbali elu ma ya mere a hụrụ ya dị ka ihe enyemaka nwere ike imeziwanye. Isi mmetụta nke nitrate oxide bụ na ọ na-agbanye arịa ọbara anyị, nke pụtara na ha na-abawanye na dayameta. Na arịa ndị ahụ sara mbara karị, ọbara oxygen ndị ọzọ bara ọgaranya nwere ike ịgbanye n’uru ahụ, nke achọrọ maka iku ume ikuku.
Na oxygen ka ị nwere na akwara gị, ka ATP ma ọ bụ ume nwere ike ịmepụta. Ugbu a, ihe ọ juiceụ juiceụ beetroot nwere mmetụta ụfọdụ na ọkwa molekụla kwa, ọ bụ ezie na nke ahụ na-esitụrụ m ike. Ihe ọ juiceụ beụ beetroot n'ezie ly nwere ụfọdụ mmetụta na-adọrọ mmasị na agba nke nsị gị na mamịrị gị, nke na-eme ka ọ na-acha ọbara ọbara, ọ bụkwa ntakịrị ihe ijuanya oge mbụ ị gbalịrị ya.
Ah, ị ga-ahụ ihe m na-ekwu, ọ bụrụ na ịnwale ihe ọ beụ beụ beetroot bụ ihe dịịrị onye ọ bụla na-agba ịnyịnya, ma ọ bụ cappuccino ma ọ bụ espresso ma ọ bụ ọbụna ọcha dị larịị ma ọ bụ piccolo, ọtụtụ n'ime anyị na-adabere na ya tupu anyị ewere igwe kwụ otu ebe. Mana ọ nwere mmetụta na arụmọrụ anyị? N'ezie, egosila na caffeine na-emeziwanye arụmọrụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị mmega ahụ niile. Site na agba ọsọ gaa na mmemme ntachi obi.
Anyị chere n'ezie na anyị ga-etinye ya n'ule ahụ na nnwale GCN nke anyị. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịnwale kilomita ise, nnwale oge niile. Nwalee n’ụbọchị dị iche iche.
Onye nwere kọfị a tụrụ atụ. Ihe dị iche bụ na otu kọfị bụ caffein na nke ọzọ bụ caffeinated. O bu ihe nwute, anyi enwebeghi ike ime otu GCN rue ugbu a - Mee ka onye na-eweta ihe a kwenye ịnya ịnyịnya ibu mgbe kọfị kọfị kọfị.
Yabụ, anyị emeghị ya ịme nnwale a, mana anyị ka na-arụ ọrụ na ya, ya mere lelee mpaghara a. Achọrọ m ikwughachi na ihe kacha mkpa iji gbasie ike ma gbasie ike na igwe kwụ otu ebe gị bụ ịnwe nri kwesịrị ekwesị, ma ị ga-anwa ị nweta nri gị n'ụzọ ahụ. Ekwesiri ileba anya na nri dika ihe ikpe azu.
Ọ bụghị ihe mbụ ị ga-eru. Ha nọ ebe ahụ iji gbakwunye nri gị mgbe ịchọrọ ha. Na niile nke nri anyị kwuru, ihe n'ezie adịghị mma; n’ezie, imebiga ihe ókè pụrụ n’ezie imebi ihe.
Yabụ, ọ bụrụ na nri gị na-enweta ihe ịchọrọ, ịgaghị emefu ego na ọgwụ dị oke ọnụ. Ihe ọzọ kwesiri ekwusi ike bụ na anaghị edozi usoro nri n'ụdị ọgwụ. E nwere ezigbo mma Mmeju na ogbenye mma Mmeju si n'ebe na ị nwere ike ghara mgbe niile ịtụkwasị obi labeelu.
Ha enweghi ezigbo ihe ịchọrọ, ha enweghịkwa adịghị ọcha ị na-achọghị iji. I nwere ike iche na mmetọ ọzọ na ihe ize ndụ nke nnwale dị mma bụ naanị nsogbu nye ndị egwuregwu egwuregwu. Mana onweghi onye choro igbakwunye ihe amaghi aru na aru ya.
Yabụ mgbe ịzụrụ mgbakwunye, nweta ha site na isi iyi ama ama ma tụlee ịzụ ahịa n'aka ụlọ ọrụ akpọrọ asambodo asambodo, enwere m olileanya na edemede a ga - enyere gị aka inweta pasent ise a, ma ọ bụ ikekwe otu pacenti ga - enyere gị aka iru ebumnuche gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara mgbakwunye karịa hapụ ha na nkwupụta. Echefula inye anyị mkpịsị aka aka - kekọrịta ndị a na ndị enyi gị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe kpatara ya ọ dị Dị ka ihe dị mkpa dị ka ịzụta ihe mgbakwunye dị ọcha, pịa ebe a iji hụ isiokwu Cy mere na Informed Sport.
Ọgwụ na-egbu mmadụ aghụghọ?
Mgbatị ọbarana iji EPO eme ihe bụ iwu na-akwadoghịn'ịghọ aghụghọ ule. Ma ọ bụrụ na ego abụghị ihe ọ bụla, a ga-enweta otu nsonaazụ ahụ n'ụzọ iwu. Ndị na-agba ọsọ na-azụ ọzụzụ na elu, ihe dị ka mita 6,000 karịa elu mmiri, nwere ike ịhụ mmụba na ọkwa erythropoietin ha.
mkpụrụ obi na peloton
Kedu ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè si aghọ aghụghọ?
Ngwunye ígwè, ma ọ bụ doping ígwè, na asọmpiịgba ígwèokwu, bu usoro nken'ịghọ aghụghọ ulesite n'iji igwe zoro ezo enyere aka ịkwalite igwe ịgba ọsọ. Okwu a bu ihe eji eme ya na ogwu ogwu,n'ịghọ aghụghọ ulesite na iji ogwu na-eme ka aru oru.
Ndi igwe di ocha ugbu a?
Enwere ike ịsị ọtụtụ ihe a:Cygba ígwè taadị ọcha karịa ka ọ dị na mbụ. Ule enweela ọganihu site na nnukwu mmali na ndị na-eme egwuregwu agbaala ọbara ha oge, yana. Nke a dị mkpa maka mmemme nnwale dị ọkara.Jul 26. Dec 2019
Cycgba ígwè bụ egwuregwu dị ọcha?
Enwere ike ịsị ọtụtụ ihe a:Cygba ígwètaa dị ọcha karịa ka ọ dị na mbụ. Ule enweela ọganihu site na nnukwu mmali na ndị na-eme egwuregwu agbaala ọbara ha oge, yana. Nke a dị mkpa maka mmemme nnwale dị ọkara.Jul 26. Dec 2019
Gini mere o ji adighi mma?
Azịza doro anya bụ nadopingna-enye iheikenenkeuru. Mana uru bụ naanịikenenkenweela n'ihidopingamachibidoro: site na imebi iwu nkedopingonye na-eme egwuregwu na-enweta uru na ndị ọsọmpi na-asọpụrụ iwu ya anaghị enweta.Ọgọst 17 2016
Gịnị kpatara ọbara doping ji bụrụ ihe ọjọọ nye gị?
Site na ịba ụba uhieọbaramkpụrụ ndụ,ọbara dopingna-akpataọbaraka thicken. Okpukpo a na-eme ka obi na-arụsi ọrụ ike karịa ka ọ ga-emeọbaraahụ dum. N'ihi ya,ọbara dopingna-eweta ihe ize ndụ nke:ọbarauwe.Ọgọst 20 2019
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-aghọ aghụghọ?
Lance Armstrong nwere ike gbanween'ịghọ aghụghọ ulen'ime ụdị nka, mana ikwe ka iwu bụrụ ihe jupụtara ebe niile kemgbe mmalite. Ọgwụ ọjọọ, ọbara doping, agbụrụ idozi, Jersey tugging, ike ike ịnya, n'uzo na ezighi ezi pacing, towing, na-ewere mkpirikpi he - professionalịgba ígwèahụla ọtụtụ mmejọ na afọ.
Products nwere ọgwụ na-agba ọbara ka ọ na-agba ịnyịnya ígwè?
Ndị na-eme nchọpụta achọpụtala ihe akaebe na-egosi na e jirila ọgwụ ọhụrụ na-agba ọbara mee ihe ọtụtụ afọ na-enweghị ahụrụ ya. Nchọpụta nke Aderlass na-ekwere na ngwaahịa a, H7379 Hemoglobin Human, ka eji kemgbe afọ 2016.
Kedu ka mmịnye ọbara si enyere aka na egwuregwu ntachi obi?
Ya mere, mmụba haemoglobin site na doping ọbara nwere ike ịbawanye ụba oxygen chọrọ n'ime ahụ iji mee ka akwara ndị na-agba ọsọ na-arụ ọrụ dị elu. Site n'ịgbado ọbara, enwere ike ịbawanye ume na ntachi obi maka ịgba ịnyịnya ígwè na egwuregwu ndị ọzọ chọrọ ihe omume dị anya.
Isnye bụ ihu doping na ịgba ígwè?
Onweghikwa egwuregwu na egwuregwu nke jikọrọ ya na aghụghọ dị ka ịgba ịnyịnya ígwè na Tour de France. Lance Armstrong bụ ihu nsogbu ịgba ịnyịnya ígwè nke ịnyịnya ígwè, mana n'eziokwu egwuregwu ahụ na-aghọ aghụghọ oge tupu Armstrong, yana n'ụdị okike niile. Ihe nketa ahụ ga-anọgide na-adịgide ruo ogologo oge n'ọdịnihu.